Daraasadahaagu ma waxyeello ka badan kuwa wanaagsan baa? | Martech Zone
Axad, Oktoobar 4, 2009 Arbacada, Maarso 23, 2011 Douglas Karr
Waxay u muuqataa in barnaamij kasta oo ka mid ah baraha bulshada ay hadda ku jiraan sahan ama muuqaal codbixineed. Twitter ayaa leh xayeysiis, PollDaddy waxay soo saartay qalab gaar u ah Twitter, SocialToo waxay leedahay barnaamijyo codbixin oo loogu talagalay Twitter iyo Facebook, Zoomerang wuxuu leeyahay aalad isku-dhafan oo Facebook ah, Iyo LinkedIn waxay leedahay codbixin caan ah codsiga.
Shirkado aad iyo aad u tiro badan ayaa daad gureynaya sahanno iyo codbixinno si loo ogaado arrimaha ku saabsan sida ay macaamiishoodu u arkaan waxyaabaha iyo adeegyadooda. Maaddaama sahankan iyo aaladaha codbixintu ay noqdeen kuwo baahsan oo si sahlan loo isticmaali karo, waxaan aragnay in badan iyo in ka badan… laakiin tayada su'aalaha guud iyo natiijooyinka soo socda ayaa sii yaraanaya. Baadhitaanadani waxay run ahaantii ku kacayaan shirkadaha waxyeello aan ka wanaagsanayn. Qoritaanka sahan xun ama ra'yi ururin iyo go'aan ka gaarista natiijooyinka waxay dhaawici karaan shirkaddaada.
Waa kuwan tusaale sahan aan shalay helay:
Dhibaatada ka jirta su'aashan sahaminta ayaa ah inay tahay mid aan caddayn iyo waxay u baahan tahay aniga in aan doorto ikhtiyaar inkasta oo aan taas ku diidi karo wax kasta oo jawaabaha waa run. Tan iyo markii aan si guul leh u isticmaalay dhammaan laakiin Adeegga Macaamiisha, waxaa laga yaabaa inaan aad ugu habboonaado inaan ku xusho Adeegga Macaamiisha jawaabtayda. Natiija ahaan, shirkaddu waxay rumaysan kartaa inay u baahan tahay inay horumariso Adeeggeeda Macaamiisha. Tani dhab ahaan xaalku maaha… si fudud waa natiijada keliya ee aanan aqoon u lahayn.
Waxaan sidoo kale arkay codbixinno iyo sahanno lagu xadgudbay shirkadaha leh macaamiishooda sarreyso. Halkii ay ku xallin lahaayeen arrimaha lagu soo warramey macaamiisha ka tagtay, shirkadda ayaa gacanta ku xushay su'aalaheeda sahaminta iyo jawaabaha ah inay xoogga saarto meelaha ay ku qanacsan tahay inay wax ka qabato. Marka shirkad dhibaato haysata ay ogyihiin inay fure u tahay wareejintooda waxay si fudud uga fogaanaysaa inay weydiiso su’aal iftiimin lahayd. Mah.
Helitaanka talada shirkadda sahaminta macaamiisha ayaa kaa caawin karta inaad dhisto a sahaminta oo adeegsata hababka ugu fiican wuuna helayaa sicirka jawaabta sare. Hubso inaad raacdo Blog macluumaad Information - waxay heystaan ​​khibrad badan iyo hagitaan ku saabsan falanqaynta jawaab celinta macaamiisha si wax ku ool ah.
Kahor intaadan go'aansan inaad dirto ra'yi dhiibashadaada soo socota ee Twitter, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho talobixinta shirkad sahan xirfad leh. Waxay kaa caawin karaan inaad farsamayso farriimahaaga, aad u badiso sicirka jawaabta, iska ilaali su'aalaha aan mugdiga lahayn ama marin habaabinta ah, iyo inaad fahanto farqiga u dhexeeya jawaabaha.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad adeegsato mashiin sahan oo aad u adag. Waxaan ahay taageere weyn Qalabaynta (kaliya maahan inay saaxiibo yihiin), laakiin maxaa yeelay dhab ahaantii waxaan horumarin karaa sahan firfircoon. Aniga oo ku salaynaya jawaabta su'aasha, waxaan ku hogaamin karaa suaaliyuhu su'aal cusub oo si qoto dheer u qodaysa jawaabtooda.
Maxaan Ka Baran Karnaa Kanye, Taylor iyo Beyonce
Oktoobar 6, 2009 at 2:50 AM
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay tan, Doug! Si loo sii wado qodobkaaga, waxaa xusid mudan in inta badan waxa loo maro cilmi baarista ay gebi ahaanba iska indhatirto qeybta shucuurta. Marar badan, "cilmi baarayaashu" waxay helayaan waxa dadku dareemaan inay yihiin jawaabo macquul ah ama badbaado leh. Waxaan dhihi karnaa waxaan wax ku iibsanaa qiimo marka hore, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay jiraan wax kale oo go’aanka wada.
Oktoobar 6, 2009 at 9:42 AM
Oktoobar 6, 2009 at 3:12 PM